काठमाडौँ । आज (सोमबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ३१ पैसा तोकेको छ। &n...
सुनको मूल्यमा लगातार गिरावट, चार दिनमा ५७०० रुपैयाँ घट्यो
काठमाडौं । गत मंगलबार प्रतितोला ८२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्यमा लगातार गिरावट आइरहेको छ । सुनको मूल्य हाजको दिन सम्ममा प्रतितोला ५ हजार ७ सय रुपैयाँले घटेको छ । आज आईतबारसम्म घट...
काठमाडौं । आज सुनचाँदीको भाउ ह्वात्तै घटेको छ । सुनको भाउ आज तोलामा १५ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ७७ हजार रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । शुक्रबार पनि सुन प्रति तोलमा ३ ...
काठमाडौँ । आज (आइतबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर स्थिर छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेको छ। &nbs...
काठमाडौँ । आज (शनिबार) पनि अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर बढेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ५८ पैसा तोकेको छ। ...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूँजी बजार पूँजीपतिहरुले कारोबार गर्ने थलो मात्र नभएको बताउनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा ‘धितोपत्र सम्बन्धी प...
रु ५० लाखसम्मको ऋण लिन तथा नवीकरण गर्दा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एक सर्कुलर जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको जनाएको हो। केन्द्रीय बैंकको सर्कुलरमा भनिएको छ, &ld...
झन् घट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस् कति छ आजको भाउ ?
काठमाडौँ । केही दिनदेखि अस्वाभाविक रुपमा बढिरहेको सुनको भाउ हिजोदेखि घट्न थालेको छ। साताको पाँचौ दिन अर्थात बिहीबार पनि सुनको मूल्य ८ सय रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ८१ हजार ५ सय...
काठमाडौँ । आज (बिहीबार) अमेरिकी डलरलगायत अन्य केही देशको विनिमयदर घटेको छ। आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११७ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ १२ पैसा तोकेको छ। ...
काठमाडाैं । झोलाबाट शुरु भएको रामपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पाल्पा जिल्लामै नमूनाका रुपमा लिफ्टसहितको बहुउद्देश्यीय भवन बनाउँदैछ । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ रु दुई करोड ६५ लाखको लाग...